I-Semalt Expert: I-Sticky Facts Nge-SEO
Xa umntu esebenza kwi-intanethi, uya kufumana ukuba akunakwenzeka ukudala umxholo onenjongo ngokuxhomekeka kwindlela enye okanye inkolelo. Ukongezelela oku, akukho sisisombululo esisodwa kwiingxaki ezenzeka kwi-intanethi. Kuyafana noku ukuthengiswa kwe-SEO . Ukuphucula izithuthi kunye nokuqhubelela abathengi kwisayithi, abanini beewebhusayithi kufuneka balungiselele umxholo wabo ukufezekisa oku, ingakumbi ukuba bafuna ukufumana abaphulaphuli ukususela kwiinkcukacha ezininzi.
Kubalulekile ukuxhasa ubuchule kunye nolwazi olunentsingiselo ukuyibuyisela. Ezi zilandelayo ziluhlu lwezinto ezi-6 ze-SEO, ezinikezwa ngu-Ivan Konovalov, i-12 (Semalt ingcali, okufuneka ukuba i-marketing iyimpumelelo:
Iphepha le-Off-page kunye ne-On-page ye-SEO (page 16)
Kukho izinto ezimbini ezibalulekileyo zeprojekthi ye-SEO ephumelelayo : ukukhangela izixhumanisi kwisayithi, nokwenza umxholo kunye nezikhundla ezichaphazelekayo kumagama angundoqo kunye namaqela abasebenzisi abasebenzisayo kwi-injini 9). Ezi zinto zibizwa ngokuba yi-off-page kunye nokulungiswa kwekhasi ngokulandelanayo..Into yokuqala yokuyenza nge-SEO kukuba uqinisekise ukuba umxholo kwisayithi uhambelana noluphi uluhlu lwabaphulaphuli abafunayo ukuba isayithi ikulinganisa kakuhle amagama angundoqo. Okuninzi njengoko izisa ithrafikhi, ithola kuphela kuwe ngoku. Isicwangciso sesibini kukudala umxholo abanye abantu abangayifumana ixabiso kwinqanaba abafuna ukudibanisa kuyo. Ezi zinxibelelwano njengevoti yokuzithemba nokwandisa ukuthembeka.
Indawo yokuqala abathengi abatsha abayi kuva ngayo ngesayithi okanye ibhendi kuluhlu lwewebhu. Ukuba akukho ndawo yokusebenza ngokufanelekileyo eyenzekayo ukuze ithathele imfuno yabantu abanjalo, mhlawumbi isayithi asiyi kuba khona engqondweni yabo.
Ingcwaba, kodwa impazamo eqhelekileyo, abaninzi abathengisayo akuyikuba nesihloko esiphezulu sephepha kwi-injini yosesho . Kubalulekile ukuba nephepha lekhasi elijoliswe kuyo emva kokudala umxholo ochaphazelekayo kunye nomxholo ochaphazelekayo. Ingxenye ye-SEO ebuye isebenzise amagama angundoqo kunye neengqamaniso eziqhelekileyo kubantu abasebenzisa iinjini zokukhangela.
Iinkcazo ze-meta ezithintekayo zanda ukhenketho-ngamazinga
Iinkcazo zeemeta ezifanelekileyo kufuneka zibe ubuncinane ezili-155 ubude. Yimbonakaliso emfutshane yento umsebenzisi engayilindela xa beqakraza kwikhonkco enikezelwa yinjinjini yokukhangela. Ukwenza isiqinisekiso sokuthi i-website ineenkcazo zemeta-meta eziphathekayo, okanye ingqiqo ngokwaneleyo, iyakwandisa amathuba okhenketho kuyo. Qinisekisa ukuba nencazelo ekhethekileyo yemeta kuwo onke amaphepha ukunyusa ithuba lokuchofoza njengoko liphucula ukujoliswa kwamagama kunye nezinto ezithandayo.
Iziphumo ezihlanu eziphezulu zifumana i-75% yeefowuni
Abanikazi bezendawo kufuneka baqonde ukuba ophakamileyo uphakamise kwi-injini yekhasi lokukhangela, ukuphakama kwezinga lokuqhosha okulindelekileyo. Njalo gxininisa imizamo yokuthengisa kwii-keywords ezibalulekileyo uze udale umxholo ochaphazelekayo malunga nala mazwi ithuba lokufikelela kwii-75.7% Source .